Bhurugwa jira kuongorora
Pasi pekukanganiswa kwezvinhu zvakawanda muhupfumi hwepasi rose, pfungwa dzevanhu dzekushandisa dzave kuita zvine musoro, uye indasitiri yemafashoni iri kuyedzawo kuita budiriro uye shanduko kubva mudambudziko. Iyo 21/22 yekuvhuvhu uye yechando ina huru fashoni svondo misangano ichangouya ku ...
Vakadzi vanoshambira maitiro maitiro
Maruva zvinhu zvinotora chinzvimbo chakakosha mune dhizaini dhizaini, uye inosvika kune irreplaceable mamiriro. Hwakakura uye hwakashongedzwa maruva zvinhu zvechokwadi akakodzera mukugadzira anoshamisira uye emazuva ano vatengi, nepo semwana uye asina ruzivo maruva mapatani ari akareruka asi achitaridzika kunge anofungidzira sp ...
Iko kukanganisa kwenzvimbo dzakasiyana dzemagariro uye kuyedzwa kwemarudzi ese ezvinhu kunogara kuchidya hunhu hwehupenyu, uye zvakare kunakidza iyo yakapusa yakapusa hunhu. "Kudzokera kuchokwadi" kunoreva kudzorera hunhu uye hupenyu mukusava nemhosva. Kana ecology yepasi ...
Mukati kugwinya-kunzwisisika mune zvemitambo indasitiri maitiro
Lululemon anowana kambani yekusimba yemumba Mirror Lululemon yakawana yekutanga-hukuru yekutenga kubva payakavambwa, uye ikashandisa madhora mazana mashanu emamiriyoni kutenga kambani yekusimba pamba Mirror. Calvin McDonald anofanotaura kuti Mirror ichave inobatsira muna 2021. Icho chigadzirwa chakakosha cheMirror i "yakazara-refu mirro ...
2022 ekutanga kwematsutso evarume nevakadzi emitambo sutu zvinhu zvinokanganiswa ne pragmatism, uye ichanyanya kutarisa kune fashoni mafashoni uye inogona kupfekwa kakawanda. rakafemerwa nezvinhu zvemitambo sutu mune 2021 yekuvhuvhu uye yechando nyowani mwaka show, chera zvakadzika mune akasiyana akateedzana e fashio ...
Sechinhu chakakosha muiyoga uye kugwinya, kuumba muviri bhurugwa kuri kuwedzera kukosha. Partial dhizaini inonyanya kukosha. Pahwaro hwekuona zviitiko zvemitambo, kutarisisa kwakawanda kunobhadharwa kune hunhu uye pfungwa yemafashoni. Njere zvakadzama dhizaini inogona kuita zvakajairika fitn ...
Kunyangwe hosha nyowani yekorona yakakonzera kumwe kusagadzikana munharaunda, iyo pfungwa yekuchengetedza zvakatipoteredza ichiri tarisiro yevatengi nemhando. Kunzwisisa kwevanhu nezvekuti nharaunda yepasi inokanganisa sei hutano hwevanhu inoramba ichiwedzera, uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza yatove ...
Kudzoreredza-iko kweye kwekupfeka kwevarume nevakadzi machira akadzoreredzwa (zvinhu)
Sezvo ramangwana rekupfeka kwemafashoni richiwedzera kuwedzera kugarisana nharaunda nekupenya, iwo machira akakuvara nekugadziriswa otomatiki, machira matsva akagadzirwa nekugadzirisa zvakare machira ekare, uye machira akagadzirwa nemicheka yemichero yechisikigo ave kuitawo fashoni. Mutengi ...
2022 chitubu uye zhizha machira maitiro akakosha mazwi
iyo inotarisa pazvinhu zvehutano, uye vanhu pasirese vakatanga kucherechedza zvakanyanya mabasa emawoko anononoka, zvese izvi zvinomanikidza mafambiro ese ehupenyu kuputsa kufunga kwavo uye kuramba vachivandudza. Mucheka uye Whitehead Textile maindasitiri wiIn 2022, apo yose utano uye upfumi vari akatarisana mutsva changamoto ...
Natural Recreation-Nyowani Fibre Trend yeVarume neVakadzi Mapfekero (Chinyorwa)
Kubva vanhu pavakapinda muzana ramakumi maviri nemasere, nekuwedzera kuderera kwepasi petrochemical zviwanikwa uye nekusimbiswa kwekuziva nezvezvakatipoteredza mumusika wevatengi vezvinhu, zvakasikwa polymer zvinhu zvine hunhu hwekuvandudza hunhu zvave kunyanya kukosha, uye ...
Kupayona kushambadzira-iko kweye nyowani inoshanda shinda yevarume nevakadzi (zvinhu)
Mushure mekupararira kwedenda, hutano hwave chinhu chakanyanya kunetsa chekunetseka kwepasirese. Kushingairira kwevanhu kuita zviitiko zvekunze kuri kuwedzera kusimba, kuremekedza mitemo yehupenyu nezvakasikwa, uye vachida kutiza kubva kuzvinhu zvakaomarara uye nemakakatanwa asina basa, vanhu vanoshuvira ...
Vibrant balance - muitiro wemitambo yemadzimai yakarukwa
Nechishuwo chevatengi cheupenyu hunononoka uye hupenyu hwakareruka, zvinhu zvakanaka izvo zvinobatsira kuyera uye hutano zviri kuwedzera kubuda. Nhabvu dzakarukwa micheka ichasanganisa yazvino uye yakasarudzika dhizaini aesthetics kuunza iyo nyowani kunzwa kune zvemitambo uye zororo zvinhu. Panguva imwecheteyo, iyo ...
KY iri pakati penyika inotungamira inogadziriswazve magetsi mhinduro mupepeti iyo iri kugadzirisa uye kutsanangudza zvakare nzira yekusimudzira magetsi zviwanikwa zvinosungirirwa pasirese. Ipa mu 18countries mhiri kweAsia, Australia, Europe, Africa neAmericaVeztaz iri kupa magetsi mangwana.